Methods implemented to accommodate animals to plateau conditions in Tibet_Photo_TIBET
A sika deer is seen at Qushui zoo in Lhasa, southwest China's Tibet Autonomous Region, Nov. 23, 2017. From oxygen generation, temperature control to humidification, various methods have been implemented to accommodate animals to plateau conditions at the zoo. (Xinhua/Chogo)
Alpacas are seen at Qushui zoo in Lhasa, southwest China's Tibet Autonomous Region, Nov. 23, 2017. From oxygen generation, temperature control to humidification, various methods have been implemented to accommodate animals to plateau conditions at the zoo. (Xinhua/Chogo)
Peacocks are seen at Qushui zoo in Lhasa, southwest China's Tibet Autonomous Region, Nov. 23, 2017. From oxygen generation, temperature control to humidification, various methods have been implemented to accommodate animals to plateau conditions at the zoo. (Xinhua/Chogo)
A lynx is seen at Qushui zoo in Lhasa, southwest China's Tibet Autonomous Region, Nov. 23, 2017. From oxygen generation, temperature control to humidification, various methods have been implemented to accommodate animals to plateau conditions at the zoo. (Xinhua/Jigme Dorje)
A wolf is seen at Qushui zoo in Lhasa, southwest China's Tibet Autonomous Region, Nov. 23, 2017. From oxygen generation, temperature control to humidification, various methods have been implemented to accommodate animals to plateau conditions at the zoo. (Xinhua/Chogo)
A breeder works at Qushui zoo in Lhasa, southwest China's Tibet Autonomous Region, Nov. 23, 2017. From oxygen generation, temperature control to humidification, various methods have been implemented to accommodate animals to plateau conditions at the zoo. (Xinhua/Jigme Dorje)
Peacocks are seen at Qushui zoo in Lhasa, southwest China's Tibet Autonomous Region, Nov. 23, 2017. From oxygen generation, temperature control to humidification, various methods have been implemented to accommodate animals to plateau conditions at the zoo. (Xinhua/Zhang Rufeng)
Deers are seen at Qushui zoo in Lhasa, southwest China's Tibet Autonomous Region, Nov. 23, 2017. From oxygen generation, temperature control to humidification, various methods have been implemented to accommodate animals to plateau conditions at the zoo. (Xinhua/Zhang Rufeng)
Zebras are seen at Qushui zoo in Lhasa, southwest China's Tibet Autonomous Region, Nov. 23, 2017. From oxygen generation, temperature control to humidification, various methods have been implemented to accommodate animals to plateau conditions at the zoo. (Xinhua/Jigme Dorje)
Alpacas are seen at Qushui zoo in Lhasa, southwest China's Tibet Autonomous Region, Nov. 23, 2017. From oxygen generation, temperature control to humidification, various methods have been implemented to accommodate animals to plateau conditions at the zoo. (Xinhua/Zhang Rufeng)
Black-necked cranes spend winter in SW China's Tib
Groups of black-necked cranes forage at the Lhasa river valley where they spend the winter season, southwest China's Tibet Autonomous Region, Nov. 23, 2017.
"Migration on an Icy Lake" wins top photography aw
"Migration on an Icy Lake" depicted the villagers in Shannan, southwest China's Tibet, moving their sheep between pastures during the winter season, which is proved to be a dangerous yet exciting journey.